Bardaale: Tuulooyin lagala wareegay Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Ciidamada dowladda ayaa howl-gallo lagu sugayo ammaanka ka sameeyay tuulooyin hoos taga degmada Bardaale ee gobolka Baay, halkaas oo ay ka saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha degmada Bardaale Bardaale Maxamed Isaaq Xasan “Carro-Case” ayaa Radio Muqdisho u sheegay in ciidamadu ay howl-gallo ka sameeyeen tuulooyinka Gelgel iyo Buulo Xaawo oo hoos taga degmada Bardaale.
Wuxuu sheegay in halkaas laga ceyriyay kooxo dhibaato ku hayay dadka shacabka ah, kuwaas oo la tuhusan yahay inay Al-Shabaab xiriir la leeyihiin.
Sidoo kale ciidammada ayaa howl-gallo ka sameeyey waddada isku xirta Bardaale iyo Owdiinle oo ay dadka ku dhibaateyn jireen kooxo hubeysan.
Dhinaca kale ciidanka Booliska ayaa gacanta ku dhigay dad lagu tuhunsan yahay dambiyo iyo ammaan daro sida uu sheegay Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha qeybta Baay ee Booliska.
Xaafadaha magaalada ayay ciidamadu gaaleen ayagoo baaraya guraha qaar sida uu ku soo warramayo wariyaheena magaalada Beydhabo Siraaji Sheekh Isaaq.